सल्यानमा गुडिरहेको बसबाट लडेर एक युवाको निधन | Himal Times
Home समाचार सल्यानमा गुडिरहेको बसबाट लडेर एक युवाको निधन
सल्यान । सल्यानमा गुडिरहेको बसको ढोकाबाट लडेर एक जना युवकको मृत्यु भएको छ। जिल्लाको बागचौर नगरपालिका वडा नं. ११ का २१ वर्षीय एकराज खड्काको गुडिरहेको ना ५ ख १००१ नम्बरको बसको ढोकाबाट लडेर मृत्यु भएको हो।
सल्यानका प्रहरी प्रमुख डिएसपी विकास थापाका अनुसार खड्का बुधबार बिहान ११ बजेतिर बागचौर नगरपालिका वडा नं. २ खरिबोटमा ना ५ ख १००१ नम्बरको बसको ढोकाबाट खसेर गम्भीर घाइते भएका थिए। उक्त बस बाफुखोलाबाट दाङको तुलसीपुरतर्फ आउँदै थियो।
घाइते खड्कालाई बागचौरस्थित जनप्रिय पोलिक्लिनिकमा प्रारम्भिक उपचारपछि थप उपचारको लागि जिल्ला अस्पताल सल्यान लगिएको थियो। उपचारका क्रममा उनको साढे १ बजेतिर जिल्ला अस्पतालमा मृत्यु भएको डिएसपी थापाले बताए।
‘ढोका नजिकै बसेका खड्का चालकले ब्रेक हान्दा सन्तुलन गुमाएर बसबाट लडेको भन्ने खुल्न आएको छ,’ डिएसपी थापाले बताए । यधपी बसका स्टापका अनुसार बान्ता हुन थालेपछि उनी ढोकामा आएर बान्ता गर्ने क्रममा सन्तुलन गुमाएर लड्न पुगेको दाबी गरेका छन्।
Previous articleनेकपा सचिवालय बैठक आगामी १३ गते बस्ने, अध्यक्षद्धयको छुट्टाछुट्टै प्रस्ताव पेस हुने
Next articleमलेसियामा बिरामिकाे संख्या ५० हजार नाघ्याे, निधन हुने ३ सय २२
ओसाका फ्रेन्च ओपनबाट बाहिर
बुधबार काठमाडौं उपत्यकाका यी स्थानमा विद्युत उपलब्ध नहुने